လုပ်ငန်းခွင်မှာ ထားရှိသင့်သည့် ခံယူချက်များ - Myanmar Network
Posted by Richard Michael William on December 10, 2015 at 15:51 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
- ပြီးစီးအောင် လုပ်ရမည်
- စနစ်တကျ လုပ်ရမည်
- သေသပ်ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ရမည်
- လူ အချိန် ငွေ ပစ္စည်း မလေလွင့်အောင် လုပ်ရမည်
- စေတနာထား၍ လုပ်ရမည်
Honestly / ရိုးသားမှု
သင့်အနေဖြင့် ဘယ်နေရာ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် အဓိကနေဖြင့် ရိုးသားမှုဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့အညီ လုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
မိမိအလုပ် မိမိအပေါင်းအသင်းတို့အပေါ် ရိုးသားမှုရှိရပါမယ်
သင့်ရဲ့ ရိုးသားမှုဟာ သင့်ဘဝရဲ့ အနာဂတ်မီးရှူးတန်ဆောင်တစ်ခုပါ
မရိုးသားဘူးဆိုရင်တော့ သင်သွားလေရာမှာ အရိပ်မည်းကြီးတစ်ခုလို ကပ်လျက်လိုက်နေပါလိမ့်မယ်....
Obedience / နာခံတတ်မှု
သင့်အနေဖြင့် ဘယ်နေရာ ဘာအလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ်
နာခံတတ်မှု လေးစားတတ်မှု တာဝန်သိတတ်မှု တာဝန်ယူတတ်မှုတွေ ရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
မိမိထက် ပိုသိသော ပို၍ တတ်မြောက်သော သူတို့သည် အသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေ ရွယ်သူဖြစ်စေ
အသက်ငယ်သူဖြစ်စေ လေးစားတတ်ရမယ် နာခံတတ်ရမယ် လိုက်နာတတ်ဖို့လိုပါတယ်
မိမိသည် နည်းပညာတစ်ခုကို မသင်ယူမီ အဲ့ဒီနည်းပညာကို တတ်သလိုလို မတတ်သလိုလို မနာခံ မယူတတ်ဘဲ နေမည်ဆိုပါက ဘယ်သောအခါမျှ တတ်လာမည်မဟုတ်ချေ။ မိမိသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အလုပ်တစ်ခု စတင်လုပ်ဆောင်တော့မည်ဆိုပါက မိမိထက် တတ်ကျွမ်းသူများ သင်ပေးသမျှကို နာခံတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်.......
Teamwork / အဖွဲ့အစည်း
မိမိသည် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တော့မည်ဆိုလျှင် Good Teamwork ကောင်းသော တူညီသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်
အလုပ်တစ်ခုကို ပြဿနာတစ်ခုကို တစ်ယောက်တည်းဖြေရှင်းခြင်းထက် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြေရှင်းခြင်းများဖြင့်
ကိစ္စတစ်ခု အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးနိုင်မည်
Teamwork မရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းခွင်သည် အောင်မြင်မှုနိယာမကို ရှာတွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ချေ
ထင်းစီးတစ်စီးကို တစ်ယောက်တည်း မချိုးနိုင်ပဲ အများပူးပေါင်း ချိုးကာမှ ကျိုးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်......
မိသားစုမှာလည်း မောင်နှမရင်းချာချင်း Family Teamwork မိသားစု Teamwork ရှိနေရပါမယ်....
မိမိသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲမှာ လုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ပါက မိမိကြောင့် Teamwork မပျက်စေဘဲ ရှိရင်းစွဲ Teamwork ကို ပို၍ ခိုင်မြဲစေရန် ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်...........
Loyalty / သစ္စာရှိမှု
မိမိသည် ဘယ်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် မိမိလုပ်သော အလုပ်အပေါ်မှာ သစ္စာရှိဖို့လိုပါတယ်
အလုပ်အပေါ်မှာ သစ္စာရှိသလို မိမိကိုယ် အလုပ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းရှင်ပေါ်မှာလည်း သစ္စာစောင့်သိတတ်ဖို့ လိုပါတယ်
လုပ်ငန်းခွင်ပေါ်မှာ မဆိုထားဘိ မိမိအပေါင်းအသင်း
မိမိသူငယ်ချင်း မိမိချစ်ခင်ရသောသူတို့အပေါ်မှာလည်း သစ္စာရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်.......
သစ္စာစောင့်သိတော့သူများသည် မိမိဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားတတ်သူများလည်း ဖြစ်ပေသည်...
Integrity / ယဉ်ကျေးဖော်ရွေမှု
မိမိသည် ဘယ်နေရာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေ
လူမှု့ကွန်ယက်မှာ ဆက်ဆံရေး ယဉ်ကျေးဖော်ရွေမှု ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်
သင်ချစ်လျှင် ကျွန်န်ုပ်မမုန်းပါ ဆိုပေမယ့်
တခြားသူထံမှာ အပြုံးကို လိုချင်ရင် မိမိက ပထမဦးစွာ တဖက်သူကို ပြုံးပြပေးလိုက်ပါ
မိမိအနေဖြင့် အမြဲတမ်းပြုံးနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ
မိမိအပြုံးတစ်ခုဟာ မိမိနှင့် တခါမှမတွေ့ဖူးသောသူနဲ့ တွေ့ရှိမည်ဆိုလျှင်ပင် မိမိသည် တခြားသူအတွက် မမေ့နိုင်ဖွယ်ရာ လူတစ်ယောက်မှတ်ယူနိုင်ပေသည်...
မိမိအပြုံးကြောင့် စိတ်ဒေါသထွက်နေသူကိုပင် အပြုံးပန်းများမျှဝေစေပြီး ဒေါသမီးကို ချုပ်ငြိမ်းသွားစေနိုင်ပါတယ်
ယခုကစ၍ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုံးကြည့်ပါ.....
တခြားသူကို အပြုံးလေးဖြင့် ပြောကြည့်ပါ
Efficiency / ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု
မိမိသည် ဘယ်နေရာ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ်
မိမိတကယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်လိုသော အလုပ်ကို အဓိကအနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာရပ်တွေ လေ့လာဆည်းပူးထားဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးပါတယ်.....
ဘယ်သောအခါမျှ နည်းပညာ သင်ယူလေ့လာမှု ကုန်ဆုံးနိုင်သည်ဟူ၍ မရှိပါ ..အသက်ရှင်သ၍ သင်ယူလေ့လာမှုဆိုတာ ဆည်းပူးနေရမည်ဖြစ်ပါတယ်
သင်ယူလေ့လာမှုတိုင်းကိုလည်း လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမှ တကယ့်လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုဆိုတာ ရရှိခံစားလာရမှာပါ ......
Optimistic / အကောင်းမြင်ခြင်း
မိမိအနေဖြင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင် အပေါ်မှာ အကောင်းမြင်နိုင်တဲ့ စိတ်လေးအဓိက ထားနိုင်ဖို့လုိပါတယ်
မိသားစုမှာဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကောင်းအဆိုးတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အမြဲတမ်းအကောင်းမြင်တတ်တဲ့ အတွေးသဘောထားလေးတွေ ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်
အပေါင်းအသင်းတွေအပေါ်မှာလည်း အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ သဘောထားတွေ ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါတယ်
လူတိုင်းဟာ အမှားနဲ့မကင်းနိုင်သလို လူတယောက်ကို အကောင်းမမြင်ဘဲ ဆိုးကွက်တွေကို ရှာရတာ လွယ်ကူပါတယ်
အကောင်းမမြင်တတ်တဲ့ လူတယောက်ဟာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
မိမိကိုယ်ကို အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ စိတ်သဘောထားတည်ဆောက်နိုင်သလို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ စိတ်သဘောထားတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်......
Now / ယခု
မိမိသည် ဘယ်အရာ ဘာအလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ်
သင်ဘယ်သောအခါကမှ မစတင်ခဲ့သော အလုပ်တစ်ခုကို ယခုအချိန်ကစ၍ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် သင် နောက်ကျတဲ့သူ မဖြစ်သေးပါ
သင့်အနေဖြင့် ယခုစတင်ပြီး မလုပ်ခြင်းကသာ
အဓိကအရေးကြီးတာက သင်စလှမ်းမယ့် ခြေတစ်လှမ်းပါပဲ
ယနေ့အောင်မြင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် ခုန်ပျံကျော်လွှား၍ အောင်မြင်မှုတောင်ထိပ်သို့ ရောက်လာခြင်းမဟုတ်
ယခုဆိုတဲ့ ခြေတစ်လှမ်းက စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်
သင်သာ ယခုအချိန်က သင်ယူလေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလျှင် မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ NOW ယခုအချိန်ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးလေးကို နားလည်လာမှာ သေချာပါတယ် .......
( ရေနံ့သာ ဇော်ဇော်မြင့် )
- ပွီးစီးအောငျ လုပျရမညျ
- စနဈတကြ လုပျရမညျ
- သသေပျကောငျးမှနျစှာ လုပျရမညျ
- လူ အခြိနျ ငှေ ပစ်စညျး မလလှေငျ့အောငျ လုပျရမညျ
- စတေနာထား၍ လုပျရမညျ
Honestly / ရိုးသားမှု
သငျ့အနဖွေငျ့ ဘယျနရော ဘယျအလုပျကိုပဲ လုပျလုပျ အဓိကနဖွေငျ့ ရိုးသားမှုဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျနဲ့အညီ လုပျဆောငျတတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ
မိမိအလုပျ မိမိအပေါငျးအသငျးတို့အပျေါ ရိုးသားမှုရှိရပါမယျ
သငျ့ရဲ့ ရိုးသားမှုဟာ သငျ့ဘဝရဲ့ အနာဂတျမီးရှူးတနျဆောငျတဈခုပါ
မရိုးသားဘူးဆိုရငျတော့ သငျသှားလရောမှာ အရိပျမညျးကွီးတဈခုလို ကပျလကျြလိုကျနပေါလိမျ့မယျ....
Obedience / နာခံတတျမှု
သငျ့အနဖွေငျ့ ဘယျနရော ဘာအလုပျကိုပဲ လုပျလုပျ
နာခံတတျမှု လေးစားတတျမှု တာဝနျသိတတျမှု တာဝနျယူတတျမှုတှေ ရှိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ
မိမိထကျ ပိုသိသော ပို၍ တတျမွောကျသော သူတို့သညျ အသကျကွီးသညျဖွဈစေ ရှယျသူဖွဈစေ
အသကျငယျသူဖွဈစေ လေးစားတတျရမယျ နာခံတတျရမယျ လိုကျနာတတျဖို့လိုပါတယျ
မိမိသညျ နညျးပညာတဈခုကို မသငျယူမီ အဲ့ဒီနညျးပညာကို တတျသလိုလို မတတျသလိုလို မနာခံ မယူတတျဘဲ နမေညျဆိုပါက ဘယျသောအခါမြှ တတျလာမညျမဟုတျခြေ။ မိမိသညျ အဖှဲ့အစညျးတဈခုမှာ အလုပျတဈခု စတငျလုပျဆောငျတော့မညျဆိုပါက မိမိထကျ တတျကြှမျးသူမြား သငျပေးသမြှကို နာခံတတျဖို့ လိုအပျပါတယျ.......
Teamwork / အဖှဲ့အစညျး
မိမိသညျ အဖှဲ့အစညျး တဈခုနှငျ့ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျတော့မညျဆိုလြှငျ Good Teamwork ကောငျးသော တူညီသော အဖှဲ့အစညျးတဈခုအဖွဈ ရပျတညျနိုငျရနျ ကွိုးစားဖို့လိုပါတယျ
အလုပျတဈခုကို ပွဿနာတဈခုကို တဈယောကျတညျးဖွရှေငျးခွငျးထကျ အားလုံးပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး ဖွရှေငျးခွငျးမြားဖွငျ့
ကိစ်စတဈခု အောငျမွငျစှာ ပွီးဆုံးနိုငျမညျ
Teamwork မရှိသော အဖှဲ့အစညျးတဈခု၏ လုပျငနျးခှငျသညျ အောငျမွငျမှုနိယာမကို ရှာတှနေို့ငျမညျမဟုတျခြေ
ထငျးစီးတဈစီးကို တဈယောကျတညျး မခြိုးနိုငျပဲ အမြားပူးပေါငျး ခြိုးကာမှ ကြိုးနိုငျလိမျ့မညျဖွဈသညျ......
မိသားစုမှာလညျး မောငျနှမရငျးခြာခငျြး Family Teamwork မိသားစု Teamwork ရှိနရေပါမယျ....
မိမိသညျ အဖှဲ့အစညျးတဈခုထဲမှာ လုပျဆောငျနသေူဖွဈပါက မိမိကွောငျ့ Teamwork မပကျြစဘေဲ ရှိရငျးစှဲ Teamwork ကို ပို၍ ခိုငျမွဲစရေနျ ကွိုးစားကွဖို့လိုအပျပါတယျ...........
Loyalty / သစ်စာရှိမှု
မိမိသညျ ဘယျအလုပျကိုပဲ လုပျလုပျ မိမိလုပျသော အလုပျအပျေါမှာ သစ်စာရှိဖို့လိုပါတယျ
အလုပျအပျေါမှာ သစ်စာရှိသလို မိမိကိုယျ အလုပျပေးထားသော လုပျငနျးရှငျပျေါမှာလညျး သစ်စာစောငျ့သိတတျဖို့ လိုပါတယျ
လုပျငနျးခှငျပျေါမှာ မဆိုထားဘိ မိမိအပေါငျးအသငျး
မိမိသူငယျခငျြး မိမိခဈြခငျရသောသူတို့အပျေါမှာလညျး သစ်စာရှိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ.......
သစ်စာစောငျ့သိတော့သူမြားသညျ မိမိဂုဏျသိက်ခာကို တနျဖိုးထားတတျသူမြားလညျး ဖွဈပသေညျ...
Integrity / ယဉျကြေးဖျောရှမှေု
မိမိသညျ ဘယျနရော ဘယျအဖှဲ့အစညျး ဘာအလုပျကိုပဲလုပျသညျဖွဈစေ
လူမှု့ကှနျယကျမှာ ဆကျဆံရေး ယဉျကြေးဖျောရှမှေု ရှိဖို့လိုအပျပါတယျ
သငျခဈြလြှငျ ကြှနျနျုပျမမုနျးပါ ဆိုပမေယျ့
တခွားသူထံမှာ အပွုံးကို လိုခငျြရငျ မိမိက ပထမဦးစှာ တဖကျသူကို ပွုံးပွပေးလိုကျပါ
မိမိအနဖွေငျ့ အမွဲတမျးပွုံးနိုငျတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈအောငျ ကွိုးစားပါ
မိမိအပွုံးတဈခုဟာ မိမိနှငျ့ တခါမှမတှဖေူ့းသောသူနဲ့ တှရှေိ့မညျဆိုလြှငျပငျ မိမိသညျ တခွားသူအတှကျ မမနေို့ငျဖှယျရာ လူတဈယောကျမှတျယူနိုငျပသေညျ...
မိမိအပွုံးကွောငျ့ စိတျဒေါသထှကျနသေူကိုပငျ အပွုံးပနျးမြားမြှဝစေပွေီး ဒေါသမီးကို ခြုပျငွိမျးသှားစနေိုငျပါတယျ
ယခုကစ၍ အတတျနိုငျဆုံး ပွုံးကွညျ့ပါ.....
တခွားသူကို အပွုံးလေးဖွငျ့ ပွောကွညျ့ပါ
Efficiency / ကြှမျးကငျြတတျမွောကျမှု
မိမိသညျ ဘယျနရော ဘယျအလုပျကိုပဲ လုပျလုပျ
မိမိတကယျအသကျမှေးဝမျးကွောငျးဖွငျ့ လုပျဆောငျလိုသော အလုပျကို အဓိကအနဖွေငျ့ ကြှမျးကငျြတတျမွောကျအောငျ လုပျဆောငျနိုငျဖို့
လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာ အသိပညာရပျတှေ လလေ့ာဆညျးပူးထားဖို့ လှနျစှာအရေးကွီးပါတယျ.....
ဘယျသောအခါမြှ နညျးပညာ သငျယူလလေ့ာမှု ကုနျဆုံးနိုငျသညျဟူ၍ မရှိပါ ..အသကျရှငျသ၍ သငျယူလလေ့ာမှုဆိုတာ ဆညျးပူးနရေမညျဖွဈပါတယျ
သငျယူလလေ့ာမှုတိုငျးကိုလညျး လကျတှကေ့ကြ လုပျဆောငျနိုငျပါမှ တကယျ့လုပျငနျးခှငျ ကြှမျးကငျြတတျမွောကျမှုဆိုတာ ရရှိခံစားလာရမှာပါ ......
Optimistic / အကောငျးမွငျခွငျး
မိမိအနဖွေငျ့ မိမိပတျဝနျးကငျြ အပျေါမှာ အကောငျးမွငျနိုငျတဲ့ စိတျလေးအဓိက ထားနိုငျဖို့လိုပါတယျ
မိသားစုမှာဖွဈစေ အဖှဲ့အစညျးမှာဖွဈစေ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အကောငျးအဆိုးတှအေပျေါမှာ မူတညျပွီး အမွဲတမျးအကောငျးမွငျတတျတဲ့ အတှေးသဘောထားလေးတှေ ရှိနဖေို့လိုအပျပါတယျ
အပေါငျးအသငျးတှအေပျေါမှာလညျး အကောငျးမွငျတတျတဲ့ သဘောထားတှေ ပွညျ့ဝနဖေို့လိုပါတယျ
လူတိုငျးဟာ အမှားနဲ့မကငျးနိုငျသလို လူတယောကျကို အကောငျးမမွငျဘဲ ဆိုးကှကျတှကေို ရှာရတာ လှယျကူပါတယျ
အကောငျးမမွငျတတျတဲ့ လူတယောကျဟာ အဖှဲ့အစညျးနဲ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး
မိမိကိုယျကို အကောငျးမွငျတတျတဲ့ အတှေးတှနေဲ့ စိတျသဘောထားတညျဆောကျနိုငျသလို ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြကိုလညျး အကောငျးမွငျတတျတဲ့ နညျးလမျးတှေ စိတျသဘောထားတှေ ပေးစှမျးနိုငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ......
မိမိသညျ ဘယျအရာ ဘာအလုပျကိုပဲ လုပျလုပျ
သငျဘယျသောအခါကမှ မစတငျခဲ့သော အလုပျတဈခုကို ယခုအခြိနျကစ၍ လုပျဆောငျမညျဆိုလြှငျ သငျ နောကျကတြဲ့သူ မဖွဈသေးပါ
သငျ့အနဖွေငျ့ ယခုစတငျပွီး မလုပျခွငျးကသာ
အဓိကအရေးကွီးတာက သငျစလှမျးမယျ့ ခွတေဈလှမျးပါပဲ
ယနအေ့ောငျမွငျနသေော ပုဂ်ဂိုလျတိုငျးသညျ ခုနျပြံကြျောလှား၍ အောငျမွငျမှုတောငျထိပျသို့ ရောကျလာခွငျးမဟုတျ
ယခုဆိုတဲ့ ခွတေဈလှမျးက စတငျခဲ့ခွငျး ဖွဈပသေညျ
သငျသာ ယခုအခြိနျက သငျယူလလေ့ာမှုတှေ ပွုလုပျတော့မယျဆိုလြှငျ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတျမှာ NOW ယခုအခြိနျဆိုတဲ့ တနျဖိုးလေးကို နားလညျလာမှာ သခြောပါတယျ .......
( ရနေံ့သာ ဇျောဇျောမွငျ့ )
Permalink Reply by Zar Ma Ni on December 11, 2015 at 18:39
Permalink Reply by htaylim on December 13, 2015 at 12:58
Permalink Reply by Myo Ko Ko on December 13, 2015 at 19:51
Permalink Reply by Aei Mon Kyaw on January 4, 2016 at 8:14
Permalink Reply by May Thin on January 4, 2016 at 9:52
Permalink Reply by Richard Michael William on December 11, 2016 at 14:44
Permalink Reply by Thin Thin Nwe on February 2, 2017 at 16:41
THanks Sayar ,
Permalink Reply by Zu Zue Aung on May 18, 2017 at 13:59